इपिएस भाषा तयारीका लागि सजिलो मोबाइल एप बजारमा :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
इपिएस भाषा तयारीका लागि सजिलो मोबाइल एप बजारमा
कोरियन भासा परीक्षाको मिती नजिकदै जादा कोरियन भासा पढ्ने नेपाली युवा युवतीलाई लछित गरेर कोरियन भासा पढ्ने नेपाली मोबाइल एप बजारमा आएको छ । Topik nepal नामक उक्त एप हाल (Android playstore) प्ले स्टोरमा उपलब्द छ भने निकट भविश्यमा एप स्टोरमा पनि उपलब्ध गराइने एप निर्माता पवन सिलवालले बताए । उनले यसभन्दा पहिला बनएको कोरियन भाषा नामक एपलाई कोरियन भाषा प्रेमी नेपालीले धेरै नै रुचाइरहेका छन्र उक्त एप ७५००० भन्दा बढी डाउनलोड भैसकेको छ ।
Topik nepal नामक यस एप कारीब ८ महिना लगाएर बनाएको उनले बताए । यस एपलाई भर्खर कोरियन भासा सिक्दै गरेको देखी टोपिक परीक्षा दिने नेपालीलाई उपयुक्त हुने उनले बताए । एप प्रयोग कर्ताले कोरियन भाषा लेख्न चाहेमा कपी कलम नचाहिने र मोबाइलमा नै हातको औंला को सहायताले लेखेर अभ्यास गर्न मिल्नेछ । यस एपमा २००० भन्दा बढी कोरियन शब्द अर्थ, बिबिध अवस्थामा प्रयोग हुने कोरियन वाक्य, इ.पि.एस. परीक्षाको नमुना प्रश्न पत्र र १०० भन्दा बढी कोरियन ब्याकरण रहेका छन । यसका अतिरिक्त एपमा अध्यारोमा बती बाल्न टर्च लाईट पनि राखिएको छ । इ.पि.एस. परीक्षा दिने नेपालिको लागी उक्त एप एक्दमै उपायोगी हुने एप निर्माताको बिस्वास छ । एप पढेर नै कोरियन भासा परीक्षा दिन सकिने उनले बताए । कोरियन नेपाली डिक्सनरी एप पनि बजारमा चाडै आउने उनले बताए । एप तलको लिंकमा थिचेर डाउन्लोड गर्न सकिन्छ ।
कोरियान भासा नेपालीमा सिक्न मिल्ने अहिले सम्मको नै सबै भन्द राम्रो एप हो । तलको लिंकलाई थिचेर डाउनलोड गर्नुहोस l